Iminyaka emincane yeqhwa: kuyini, kwenzeka nini futhi kubangelwa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iningi lethu liyayazi inkathi ejwayelekile yeqhwa eyenzekile emhlabeni wethu. Kodwa-ke, namhlanje sizokhuluma nge iminyaka encane yeqhwa. Akuyona into eyenzeka emhlabeni wonke kepha kuyisikhathi se-glaciation ephansi ephawuleka ngokwandiswa kwezinguzunga zeqhwa esikhathini samanje. Kwenzeka phakathi nekhulu le-13 nele-19, ikakhulukazi eFrance. Ingelinye lamazwe ahlupheke kakhulu kulolu hlobo lokwehla kwezinga lokushisa. Lesi simo sezulu esibandayo silethe imiphumela emibi futhi sabangela ukuthi umuntu ajwayele izimo ezintsha zemvelo.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-ice age encane nokubaluleka kwayo.
1 Iminyaka emincane yeqhwa
2 Izifundo nge-Little Age Age
4 Izinkathi zobudala beqhwa
Kuyisikhathi sezulu esibandayo esenzeka eYurophu naseNyakatho Melika kusukela ngonyaka we-1300 kuya kowe-1850. Sifanelana nesikhathi lapho amazinga okushisa ayengaphansi kokuncane kanti izilinganiso zaziphansi kunokujwayelekile. EYurophu le nto yayihambisana nezitshalo, indlala kanye nezinhlekelele zemvelo. Akukona nje kuphela ukuthi kudale imvula eyandisiwe ngesimo seqhwa, kodwa futhi kunciphise inani lezitshalo. Kumele kubhekwe ukuthi ubuchwepheshe obukhona kule ndawo abuzange bufane nanamuhla. Njengamanje sinamathuluzi amaningi wokukwazi ukudambisa izimo ezingezinhle ezinikezwe thina kulezi zimo zezulu.
Ukuqala ngqo kwenkathi encane yeqhwa akucaci. Kunzima ukwazi ukuthi isimo sezulu siqala nini ukushintsha sithinte. Sikhuluma ngesimo sezulu ukuhlanganiswa kwayo yonke imininingwane etholwe ngokuhamba kwesikhathi esifundeni. Isibonelo, uma siqoqa konke okuguqukayo okufana nokushisa, inani lemisebe yelanga, umbuso womoya, njll. Futhi siyengeza ngokuhamba kwesikhathi, sizoba nesimo sezulu. Lezi zici ziyaguquguquka unyaka nonyaka futhi azihlali zizinzile ngaso sonke isikhathi. Uma sithi isimo sezulu sohlobo oluthile, kungenxa yokuthi isikhathi esiningi sihambisana namanani okuguquguquka ahambelana nalolu hlobo.
Nokho, amazinga okushisa awahlali ezinzile njalo ngonyaka futhi ayahlukahluka. Ngakho-ke, kunzima ukwazi kahle ukuthi kwakuqala nini isikhathi esincane seqhwa. Njengoba kunikezwe ubunzima bokulinganisela lezi ziqephu ezibandayo, imikhawulo yobudala beqhwa encane iyahluka phakathi kwezifundo ezingatholakala ngayo.
Izifundo nge-Little Age Age
Ucwaningo olwenziwe yiLaboratory of Glaciology and Geophysics of the Environment of the University of Grenoble and of the Laboratory of Glaciology and Geophysics of the Environment of the Federal Polytechnic School of Zurich, lukhombisa ukuthi ukunwetshwa kweqhwa kungenxa yokwanda okukhulu kwezulu, kepha ukwehla okukhulu kwamazinga okushisa.
Phakathi nale minyaka, ukuthuthuka kwezinguzunga zeqhwa kwakubangelwa ukwanda kwe- ngaphezu kwe-25% lokuwa kweqhwa ngenkathi ebanda kakhulu. Ebusika kujwayelekile ukuthi kube nemvula enjengeqhwa ezindaweni eziningi. Kodwa-ke, kulokhu, lezi zimvula zaqala ukwanda zaze zaba khona ezifundeni lapho zazingakaze zikhithike khona ngaphambili.
Kusukela kwaphela i-Little Ice Age, ukuhlehla kwezinguzunga zeqhwa bekuqhubeka cishe. Zonke izinguzunga zeqhwa zilahlekelwe cishe ingxenye yesithathu yevolumu yazo yonke futhi ubukhulu obumaphakathi bancipha ngamasentimitha angama-30 ngonyaka ngalesi sikhathi.
Ake sibone ukuthi yiziphi izimbangela ezingaba khona zeqhwa elincane. Akukho ukuvumelana okungokwesayensi ngezinsuku nezimbangela ezingadala le nkathi yeqhwa. Izimbangela ezinkulu kungaba ngenxa yenani eliphansi lemisebe yelanga ewela ebusweni bomhlaba. Lokhu kwehla kwemisebe yelanga kubanga ukupholisa kobuso bonke kanye noshintsho kumandla womkhathi. Ngale ndlela, imvula ngesimo seqhwa yenzeka kaningi.
Abanye bachaza ukuthi into eyenzeka esikhathini esincane seqhwa ingenxa yokuqhuma kwentaba-mlilo eye yenza ubumnyama baba mnyama kancane. Kulezi zimo sikhuluma ngento efana nale engenhla kepha kunembangela ehlukile. Akukhona ukuthi inani elincane lemisebe yelanga livela ngqo elangeni, kodwa ukufiphala komkhathi okwenza ukwehla kwemisebe yelanga okuthinta ubuso bomhlaba. Abanye bososayensi abavikela lo mbono baqinisekisa ukuthi phakathi konyaka we-1275 nowe-1300, lapho kwaqala khona iqhwa elincane, Ukuqhuma kwentaba-mlilo okungu-4 esikhaleni seminyaka engamashumi ayisihlanu bekuzobhekana nalesi simo ngoba konke kwenzeka ngaleso sikhathi.
Uthuli lwentaba-mlilo lukhombisa imisebe yelanga ngendlela esimeme futhi yehlisa ukushisa okuphelele okutholwa ngumhlaba. I-US National Center for Atmospheric Research (NCAR) isungule imodeli yesimo sezulu yokuhlola imiphumela yokuqhuma okuphindaphindayo kwentaba-mlilo, esikhathini esiyiminyaka engamashumi amahlanu. Imiphumela yokuqoqeka kwalezi zintaba-mlilo esimweni sezulu ivumela yonke imiphumela yokuqhuma kwentaba-mlilo okuphindaphindiwe. Yonke le miphumela yokuqongelela izaletha i-Ice Age Encane. Ukuqandiswa, ukunwetshwa kweqhwa lasolwandle, ukuguquka kokujikeleza kwamanzi, nokwehla kokuthuthwa kokushisa kuya ogwini lwe-Atlantic yizimo ezingaba khona kakhulu kwi-Little Ice Age.
Izinkathi zobudala beqhwa
Kodwa-ke, kufanele kubhekwe ukuthi umfutho weqhwa elincane awufani nezinye izikhathi ezinde nezishubile iplanethi yethu ebinazo ezingeni le-glaciation. Izimbangela zesimo sezulu azaziwa kahle kodwa ngemuva kwalomcimbi lapho sekuvele izidalwa ezinamaseli amaningi. Lokhu kusho ukuthi ezingeni lokuziphendukela kwemvelo, isikhathi seqhwa esenzeka eplanethi yethu eminyakeni eyizigidi ezingama-750 edlule singaba sihle.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeminyaka encane yeqhwa nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Iminyaka emincane yeqhwa